10 -ka Lacag ee Ugu Lacagta Badan Maraykanka | Dalalka Ugu Fiican Sanadka 2022
Bogga ugu weyn 10 -ka Lacag ee Ugu Lacagta Badan Maraykanka | Dalalka Ugu Fiican Sanadka 2022
Ahaanshaha ilmo-xannaaneyn caadi ahaan looma tixgeliyo boos shaqo oo faa'ido leh laakiin qoysaska hodanka ah ee raadinaya xannaaneeyayaal khibrad leh oo loo diyaariyey daryeelka dhallaanka, horumarka dhallinta ama lahjadaha, ma aha wax aan caadi ahayn in la helo kalkaaliyayaasha ugu mushaharka badan ee kasbada lix tirooyin.
Waddanka Maraykanka, kalkaaliyayaal xirfadlayaal ah oo leh takhasusyo iyo waayo -aragnimo xamuul xamuul ah kama baxaan dalabka oo aad baa loo siiyaa.
Si kastaba ha noqotee, helidda xirfado badan ayaa fursad kuu siineysa inaad si dhab ah ugu dallacdo qiime sare shaqadaada. Tani waa sababta oo ah waxaad u baahan doontaa inaad ka hesho shahaadooyin kulleej meelo badan oo ka mid ah Mareykanka ka hor intaadan qaadan kaalin shaqo kalkaaliso ahaan. Dhinaca kale, qoysaska qaarkood ayaa aad u jecel inay kula shaqeeyaan haddii aad hore u aqoon u leedahay horumarinta ilmaha.
Daryeelayaasha noocan oo kale ah waxay shaqeeyaan waqti dheer ama dedejiyaan waxayna xitaa raaci karaan qoyska.
Maxay qabataa Nanny?
Waxaa jira waxyaalo badan oo aad samayn karto sida ilmo -xannaaneyn waxayna badanaa ku jiraan;
Indhaha ku haynta carruurta macmiilkaaga
La joogista iyaga dhammaadka wiigga marka waalidku ku mashquulo waxyaabo kale
La safrida qoysaska fasaxyada si waalidiinta carruurtu u helaan madadaalo la rabay
Waa kuma Nanny oo Mushaharkoodu sarreeyo?
Xannaaneeyaha dakhligoodu sarreeyo waa midka sameeya wax ka badan xannaanayn joogto ah oo joogto ah. Haddii aad damacsan tahay inaad hesho mushahar aad u sarreeya, waxaa muhiim ah inaad dhex marto hay'ado awood u siiya nayntooda xirfadaha lagama maarmaanka u ah inay siiyaan taageero tayo leh ilmo kasta oo ay ilaaliyaan.
Sideen ku Noqon Karaa Hooyada Ugu Mushaharka Badan?
Asal ahaan, waa macmiilkaaga ayaa go'aamiya shahaadooyinka uu u tegayo. Si kastaba ha noqotee, haddii aad u qabanayso sidii shaqo waqti-buuxa ah oo aad damacsan tahay inaad ka sarreysid dadka kale, waxaa laga yaabaa inay kuu baahnaato inaad hesho shahaadooyin badan.
Khibrad dheeraad ah oo laga yaabo inay lagama maarmaan kuu noqoto adiga oo ah waalid adiga oo maraya qaar ka mid ah hay'adaha daryeelka carruurta.
Badanaa waxaa la doorbidayaa haddii aad haysato shahaadada bachelorka ee horumarinta carruurnimada, cilmi-nafsiga, ama goob la xiriirta si aad u awooddo inaad fuliso waajibaadka kuu qalma inaad tahay xannaaneeye mushahar sare leh.
Intaa waxaa sii dheer, lahaanshaha xirfadaha sida isgaarsiinta dadka dhexdooda iyo xirfadaha adeegga macaamiisha ayaa muhiim ah.
Way cadahay in raacitaanka tillaabooyinka hoose, doorashadaada inaad noqoto ilmo-xannaanayn waxay noqon doontaa A-game.
Talaabooyinka Lagu Noqonayo Hooyo
#1. Khibrad Ka Hel Daryeelka Carruurta
Naasnuujintu waa inay waayo -aragnimo badan u yeelataa carruurta, ha ahaato haynta carruurta, xannaanaynta carruurta, baridda, ama waayo -aragnimada shaqsiyeed ee carruurta.
Sidii aan hore u soo sheegay, waxaad waayo -aragnimo badan u yeelan kartaa waalid ahaan ama xubin ka mid ah qoys weyn.
Qaddarka waayo -aragnimada ee loo baahan yahay waxay ku kala duwanaan doontaa qoyska ilaa qoyska.
Markaad hesho waayo-aragnimo, waxaad ka heli kartaa gudbinta iyo waraaqaha talo bixinta qoysaska, xarumaha, ama dugsiyada aad ka shaqayso adigoo haysta tixraacyo adag iyo macluumaadka xidhiidhka oo casri ah ayaa qoyska u sahlaya inay xaqiijiyaan waayo-aragnimadaada.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Noqdo Tijaabiyaha Alaabta: 10 Siyaabood Oo Lagu Sameeyo $ 100 Dheeraad ah | TILMAAN HUBAN
Ku tabarucidda hay'ad la shaqaysa carruurta, sida isbitaalka ama barnaamijka dugsiga kadib, waxay ballaarin kartaa fursadahaaga shaqo. Shaqada iskaa wax u qabso ayaa sidoo kale bixin doonta gudbinta iyo khibrada.
Akhri: Gobolkee leh Macallimiinta ugu mushaarka badan USA? | 2022 Dib u eegid.
#2. Helo Shahaadada Xiriirinta
Asal ahaan, shahaado looma baahna, laakiin qoysaska qaarkood ayaa laga yaabaa inay si wanaagsan kuu tixgeliyaan haddii aad haysato shahaadada kulliyadda waxbarashada carruurnimada hore.
Barnaamijyada shahaadooyinka ku -meel -gaadhka ah ee arimahan ayaa bixin kara aqoon ku saabsan hab -dhaqanka carruurta, horumarka, iyo baahiyaha gaarka ah.
Ka sokow helitaanka shahaadada waa ka qaybgalka casharrada barbaarinta ama shirarka maadaama ay ku qalabeyn doonaan isgaarsiin iyo xirfado aad u wanaagsan oo aad isticmaasho marka aad la shaqeyneyso carruurta.
#3. Qayb ka noqo Urur Xirfadle
Ku biirista urur xirfadle ah sida ilmo -xannaaneyn waxay noqon kartaa mid faa'ido weyn leh maadaama ururradu ay inta badan haystaan ​​ilo badan oo ay heli karaan xubnaha ka caawin kara inay horumariyaan xirfaddooda.
Tusaale ahaan, Ururka Nanny International (INA) wuxuu bixiyaa helitaanka macluumaadka ku saabsan waxbarashada sii socota, barnaamijyada hagidda, iyo adeegyada kale.
Imtixaanka Xirfadaha Aasaasiga ah wuxuu qiimeeyaa aqoonta qofka ee daryeelka carruurta ee dhinacyada caafimaadka, badbaadada, nafaqada, iyo xirfadda. Imtixaanka shahaadaynta ee INA wuxuu ku tijaabiyaa musharrixiinta aqoontooda wax ku oolka ah ee daryeelka carruurta, sida waxbarashada ilmaha, isgaarsiinta qoyska, wacyigelinta dhaqamada kala duwan, iyo xirfadaha maamulka.
Gudbinta imtixaanaadkan iyo helitaanka shahaadooyinka u dhigma ayaa kaa caawin kara inaad ku biirto qoyska markaad shaqo codsanayso.
Sidoo kale akhri: 8 Takhasusyada Kaaliyaha Dhakhtarka ee Ugu Lacag Badan 2022
#4. Qaado Shahaadooyin Dheeraad ah
Dhammaystirka barnaamijka Horumarinta Carruurta (CDA) ee ay bixiso Golaha Aqoonsiga Xirfadlaha ayaa kaa caawin kara inaad ka dhex muuqato xirfad ahaan goobta.
Barnaamijkan shahaadada qaran wuxuu u oggolaanayaa loo -shaqeeyahaaga aqoontaada iyo kartidaada daryeelka carruurta.
Si kastaba ha noqotee, si aad u kasbato magacaabista CDA, waxaad u baahan tahay inaad ku fiicnaato dhinacyo badan, sida amniga, caafimaadka, waxbarashada, isgaarsiinta, hal -abuurka, is -dhexgalka, daryeelka carruurta guriga, iyo maamulka.
Si aad u noqoto ilmo -xannaanayn, waa inaad leedahay khibrad iyo xirfado la -shaqaynta carruurta, oo ay ku jiri karto kasbashada diblooma, ka -qaybgalka koorsooyinka tababarka, helitaanka shahaadooyinka iyo tixraacyada xirfadeed.
Intee in le'eg ayay kalkaalisadu samaysaa?
Sida laga soo xigtay daraasad dhowaan la sameeyay Juun 2021, celceliska mushaharka sanadlaha ah ee shaqo-xannaaneeyaha aadka u sarreeya waa qiyaastii $ 57,028.
Si kastaba ha ahaatee, arrimaha qaar ee saamayn kara mushaharka qofka xannaaneeya ayaa ah; heerka xirfadda, goobta, iyo sannadaha waayo -aragnimada.
Sidoo kale, waxaad u furan kartaa fursado haddii aad ku hormariso xirfaddaada. Waxaan sii burburinay mushaharka xannaaneeyayaasha sida ku xusan waxbarashada.
Adigu waad arki kartaa.
Dugsi sare: Set oo ah haya u dhexeysa $ 27,000 - $ 30,200
Diploma: Hooyooyinka ku nool Mareykanka ee haysta shahaadada diblooma waxay kasbadaan dakhli sanadle ah qiyaastii $ 40,000 - $ 43,100
Darajada Bachelor: Mushaharka dadka haysta shahaadadan ayaa u dhexeeya $ 55,000 - $ 59,400
XIDHIIDHKA: Immisa Weriye Ayaa Sameeya 2022 | Sharaxaad Shaqo Buuxa
Waxay ku habboon tahay in la ogaado in Nanny ee ku nool Mareykanka ay hesho mushahar kordhin ku saabsan 10% 16 bilood gudahood.
Tan waxaa u sabab ah korodhka celceliska qaranka ee dhammaan xirfadaha oo la siiyo shaqaalaha 16 -kii biloodba mar.
Liiska 10-ka Magaalo ee ugu Sareeya Maraykanka oo leh Shaqooyinka Nanny ee ugu Mushaharka Badan
Waxaa jira wadamo aad u yar oo dakhli kalkaalintu ka sarrayso sida caadiga ah. Markaa, natiijooyin dheeraad ah ayaa muujiyey inay jiraan mustaqbal rajo leh oo loogu talagalay xannaaneeyayaasha magaalooyinkaas.
Akhri: Yey Yihiin Kuwa Mushaharka Ugu Badan Bixiya 2022? | Ciyaaraha Ugu Fiican
#1. San Mateo
Kaalinta koowaad ee magaalooyinka ugu mushaharka badan kalkaaliyayaasha Mareykanka waa San Mateo.
Waqtigan xaadirka ah, shaqaalaynta adeegga xannaaneeyaha ee San Mateo waxay ku kacaysaa qiyaastii $ 22.50 saacaddii, iyo heerka waayo -aragnimada aad si weyn u saameysay tan oo ah xannaaneyn iyo malaha, da'da carruurta lagaa filayo inaad daryeesho.
# 2. San Francisco
Kani waa hal magaalo oo aad si fiican ugu kasbatay shaqada xannaanada.
Qiyaasta celcelis ahaan $ 21.67 saacaddii, waxaad samayn kartaa dakhli sanadeed ku dhawaad ​​$ 41,000.
Ka sokow mushaharka sare, waxaad leedahay mudnaan inaad ku raaxaysato dhowr macaash oo kale oo la socda ka shaqaynta kalkaaliye San Francisco.
Kaliforniya waa hal magaalo oo ku taal Mareykanka oo ay ka buuxaan fursado shaqo oo loogu talagalay kuwa doonaya inay ku shaqeeyaan waqti-dhiman ama ku-saleysan.
In kasta oo ay jiraan arrimo badan oo saameeya dakhliga aasaasiga ah ee shaqada caadiga ah laakiin celcelis ahaan, waxaad kasbataa qiyaastii $ 16.66 saacaddii.
Si kastaba ha noqotee, warka wanaagsani waa inaad kordhin karto shahaadooyinkaaga oo aad u furan tahay inaad kasbato mid sare.
Sida muuqata, kani waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan Mareykanka oo leh dhowr qof oo lagu qiyaasay qiyaastii 8,336,817.
Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa muujisay in celceliska mushaharka sanadlaha ah ee nanny-waqtiga buuxa ee NYC uu yahay ilaa $41,460 kaas oo marka burburku jabo uu yahay saacadii $19.93.
Si rasmi ah loogu yaqaan Washington, DC (Degmada Columbia); waa magaalo madaxda dalka Maraykanka.
Waxaa jira ku dhawaad ​​863 shaqooyinka nanny oo ka furan magaaladan iyo inta mushaharka sannadlaha ah ee nanny ee Washington DC ay tahay qiyaastii $ 34,746.
Tirada darajada 12 ee tayada daryeelka caafimaad ee la bixiyay, Idaho waa magaalo kale oo Mareykanka ah halkaas oo aad ka heshid kalkaaliyeyaal aad u mushahar badan oo iyaguna shaqadooda ku jira.
Iyada oo wadar ahaan ay furan yihiin 212 shaqo oo nanny ah, celceliska mushaharka sanadlaha ah wuxuu u dhexeeyaa $ 30,000 illaa $ 31,949.
XIDHIIDHKA: Waa Kuwee 15 -ka Tuubbooyinka Ugu Mushaarka Badan Adduunka? | 2022 Dib u eegid
Waxaad mooddaa inay jiraan wax aad u xiiso badan oo ku saabsan Portland. Ma rabtaa inaad ogaato?
Waa xaqiiqda ah in gobolkani leeyahay aragti kale oo ku saabsan kalkaaliyayaashooda oo uu leeyahay, sidaa darteed, shaqooyin xannaaneyn oo kala duwan si loo waafajiyo goobtaada, khibradaada, waxbarashadaada, iyo tayada adeegga aad bixin karto.
Nannies ee Maine, Portland waxay heshaa celcelis ahaan mushahar qiyaastii ah $ 14.83 saacaddii iyo $ 29,882 sanadkii.
Waxay ku taallaa Koonfurta New England ee Mareykanka, celceliska kharashka lagu bixiyo xanaanada Ct waa $ 15.85 saacaddii.
Mushaharka ugu yar ee Connecticut oo ah $ 12 saacaddii, waxaad kasban kartaa inta u dhaxaysa $ 12 illaa $ 25 saacaddii.
Caqabadaha saameeya dakhliga ku soo gala sida ilmo xanaaneeya ayaa noqon kara; shahaadooyinka, tayada daryeelka aad bixin karto, mas'uuliyadaha shaqada, iwm.
Intaa waxaa sii dheer, oo leh wadarta guud ee boosaska shaqo ee wadarta 358, celceliska mushaharka sannadlaha ah ee nannies ee CT waa $28,588.
Akhri: Lacag -bixiyayaasha ugu Mushaharka Badan Sanadka 2022 | 10 Waddan Ee Ugu Fiican
Montana waa gobol ku yaal Galbeedka Mareykanka halkaas oo ay ka jiraan fursado badan oo loogu talagalay xannaaneeyayaasha.
Isagoo ku daraya liiska meelaha ugu sarreeya ee lagu noolaado Mareykanka, sidoo kale waa ammaan in la yiraahdo waa mid ka mid ah meelaha ugu ammaanka badan dalka.
Nannies waxay kasbadaan shaqo sare inta ay gudanayaan waajibaadkooda waxayna mushaharkoodu u dhexeeyaa $ 20- $ 30 saacaddii.
Waxa kale oo aad ku raaxaysan kartaa dheefaha dheeraadka ah ee ku weheliya shaqadaada. Waqtigan xaadirka ah, waxaad ka heli kartaa wadar ahaan 138 boosaska shaqada Montana adiga oo rajeynaya inaad sameyso dakhli sannadeed ah $ 24,000.
Waxaa loo yaqaanaa gobolka ugu sarreeya wax soo saarka baabuurta ee Maraykanka iyo warshadaha oo ugu horreeya Midwest, boosaska shaqo ee loo heli karo nannies -ka Michigan waxay leeyihiin mushahar saacad ah oo qiyaastii ah $ 11.
Faa'iidooyinka guud ee aad u furan tahay inaad ku raaxaysato ka shaqaynta sidii ilmo -xannaanayn Michigan waa; shaqada guriga, fasaxa jirrada ee mushaharka leh, saacadaha shaqada ee dabacsan, iwm.
Nannies waxaa loo maleynayaa inay khibrad badan u leeyihiin la shaqeynta carruurta waxaana hubaal ah in doorbidyada qoysku aysan isku mid noqon doonin. Marka, waxaa habboon in aad isku hubayso shahaadooyinka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee aad ka fekeri karto oo aad waajibaadkaaga u gudan karto si waafaqsan.
Markaad noqotid nanny waa shaqo aan mushahar sare lahayn, waxaan filayaa hadda, waa inaad ku qanacdaa inay jiraan meelo Maraykanka ah oo aad lacag fiican ku samayn karto cinwaanka shaqada?
Sidoo kale, xusuusnow inaad saamayn ku yeelan karto inta aad guriga u qaadanayso.
15 -ka Buug ee ugu Wanaagsan ee Macallin kasta uu akhriyo | 2022 Liiska
15 -ka Xiddig ee TV -ga ugu Mushaarka Badan Sanadka 2022 | La cusbooneysiiyay
10ka ugu sarreeya ee Shaqooyinka Kalkaalinta Kharashaadka ugu sarreeya sannadka 2022
10 Professor -ka Kulliyadaha ugu Mushaharka Badan Maraykanka 2022
25 Shaqooyinka Ugu Mushaharka Badan Florida
Goobaha sida gumtree: 10 Beddelka Gumtree ee ugu Fiican 2022
20ka Talo ee Cashuurta Ganacsiga Yaryar ee ugu Wanaagsan | 2022
10ka Qareen ee Ugu Mushaarka Badan Adduunka | Xirfadaha Sharciga ee ugu sarreeya sanadka 2022
Ka shaqaynta qareenimo waxay noqon kartaa xirfad faa'iido badan leh haddii aad ku fiican tahay oo si habboon u...
Immisa Ayuu Sameeyaa Kaaliyaha Kalkaalisada?
Jadwalka mashquulka ah ee dadka qaar ayaan u ogolayn wakhti ku filan oo ay ku daryeelaan waalidiinta ama awoowayaasha da'da ah.…
Sida Loo Noqdo Wakiil Socdaal Oo Ka Socda Guriga 2022 | Talaabooyinka Fudud
Waxaa laga yaabaa 7, 2022
Socdaalku waa madadaalo. Laakiin ma u qorshaysan tahay ?! Hadda, taasi waa xoogaa madax xanuun ah. Ballanka, ballanka,…
Sida loo Noqdo Bartender oo aan Khibrad u lahayn 2022
Weligaa ma daawatay baarteennada khamriga isku qasaya oo ma is weydiisay haddii uu jiro dugsi u gaar ah baartender-yada?…
Waxaa laga yaabaa 9, 2022
15ka Ganacsi ee ugu Mushaar Bixinta ugu Sareeya 2022
Shahaado jaamacadeed loogama baahna dhammaan jagooyinka mushaharka sare leh. Shaqooyinka ganacsigu waxay ka mid yihiin shaqooyinka ugu faa'iidada badan,…